Gịnị bụ thermal njupụta? | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị maara nke ọma, ọnọdụ okpomọkụ mgbe anyị bilitere adịghị ka nke ahụ e dekọrọ n’ehihie, mgbe anyanwụ dị elu na mbara igwe. A na-akpọ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke kacha nta na nke kachasị dị elu n'oge enyere thermal njupụta, ma jiri ya mee nchọpụta nke ikuku na oke osimiri nke otu mpaghara ala, na mgbakwunye na-eje ozi maka ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ ubi.
Ihe ndị a bụ ụkpụrụ dị oke mkpa, ebe ọ bụ na ekele maka ọmụmụ ihe ha, anyị nwere ike ịmatakwu nkọwa gbasara ihu igwe dị iche iche.
1 Kedu akụkụ ndị na-emetụta njupụta ọkụ ahụ?
1.2 ọdịdị ala
1.3 Igwe ojii
2 Gịnị bụ mgbanwe nke diurnal okpomọkụ?
3 Gịnị bụ thermal njupụta na ...?
Kedu akụkụ ndị na-emetụta njupụta ọkụ ahụ?
Uru nke igwe ọkụ, nke a makwaara dị ka oscillation thermal, dabere na ihe ndị a:
Dị ka ọ nwere ikike ọkụ dị elu na nrụpụta ọkụ, na-eme ka mbelata ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ kwa ụbọchị na kwa afọ. Ọ bụ ezie na eriri ụwa na-ajụ oyi ma na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, oke osimiri na-eme ya na nwayọ nwayọ, yabụ na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri enweghị nnukwu ọdịiche dị n'etiti oke kachasị na opekempe, nke bụ ihe mere na mpaghara ndị dị n'ime ime.
Banyere ọdịdị ala, n’elu mkpọda ugwu ahụ oscillation na-adịkarị ala karịa nke dị na mbara ọzara, ebe ọ bụ na ha bụ ebe anaghị adịkarị mma ihu igwe.
Oke igwe ojii ahụ, obere njupụta ahụ ga-abụ ebe igwe ojii na-ekpuchi anyanwụ, na-egbochi ụzarị ya iru Earthwa.
Bịaru nso na okporo osisi na akara akara, ị ga-ebelata ebe ọkụ ga-adị ala. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ị nọ na mpaghara nwere ihu igwe dị jụụ, ọnọdụ okpomọkụ kachasị na ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị iche. (Anyị ga-alaghachi n'akụkụ a mgbe e mesịrị).
Gịnị bụ mgbanwe nke diurnal okpomọkụ?
Ọ bụ mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ nke na-eme n’etiti oge kacha ekpo ọkụ n’ụbọchị na nke kachasị njọ n’abalị. Ọdịiche dị na ọnọdụ ụbọchị nwere ike ịdị oke ukwuu na ụwa, dịka n'ọzara, ebe edere 38ºC ma ọ bụ karịa n'oge ehihie na n'abalị ha na-adaba na oyi 5ºC.
El elu okpomọkụ bụ ihe dị mkpa na mgbanwe nke okpomọkụ ụbọchị, ọ bụkwa na mgbe ike anyanwụ rutere elu ụtụtụ, akwa ọkụ, n'etiti 1 na 3 cm, nke ikuku nke dị n'elu ala na-ekpo ọkụ site na nkwenye. Mgbanwe ọkụ n’etiti ikuku a na-ekpo ọkụ na ikuku oyi dị n’elu ya adịghị arụ ọrụ nke ukwuu, nke mere na n’ụbọchị ọkọchị, okpomọkụ ga-adị iche site na 30ºC site n’elu ala ruo n’úkwù. Igwe anwụ nke nwere ike ịbanye n'oge ọkọchị dị elu karịa okpomọkụ dị n'ime mbara ụwa ahụ na mpaghara ahụ, ọnọdụ ahụ anaghị edozi ruo n'ehihie.
Gịnị bụ thermal njupụta na ...?
Maapụ nke amplitudes okpomọkụ nke Spain
Dịka anyị kwurula, ọmụmụ banyere mbara igwe dị ezigbo mkpa maka sayensị, kamakwa maka mpaghara ndị ọzọ dịka ugbo ma ọ bụ ịkọ ugbo. Ọ bụghị naanị na ọ na-atọ ụtọ ịmatakwu nkọwa gbasara ihu igwe dị iche iche, mana ekele maka nke a ọ ga-adịrị anyị mfe karị ịkọ osisi ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ, ebe ụdị ụfọdụ na-eto na ihu igwe ọ bụla. Ka ọ were, Ka anyị hụ ihe igwe ọkụ dị dị ka ihu igwe si dị:
Ọnọdụ ikuku ụwa: okpomọkụ dị elu n'ime afọ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa 18ºC, ma nwee ike iru n'etiti 20 na 27ºC. Mana ihe kachasị dị egwu bụ obere ọdịiche dị n'etiti ọnwa kachasị oyi na ọnwa kachasị mma: 3ºC ma ọ bụ obere.
Ihu igwe: Okpomọkụ na-adị elu n'afọ niile, yabụ ọ bụ ihu igwe na-enweghị oge oyi. Ọnọdụ okpomọkụ nke ọnwa kachasị oyi dị elu karịa 18ºC, na oscillation thermal nwere ike iru 10ºC.
Ihu igwe Mediterranean: okpomọkụ na-adị nwayọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile, belụsọ n'oge ọkọchị mgbe ha dị oke elu ma nwee ike iru 45ºC. Ogologo afọ okpomọkụ dị ihe dị ka 14ºC, yana ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 5ºC na 18ºC n'etiti ọnwa kachasị oyi na ọnwa kachasị mma.
Ọnọdụ ihu igwe: Okpomoku di ezigbo ala na udu mmiri, ma di elu na udu mmiri. Ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịdị ka -16ºC. Igwe ọkụ dị nnọọ ukwuu, karịa 30ºC.
Oke ugwu igwe: na ugwu okpomọkụ na-ebelata elu, ma ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na oge oyi dị ala, na-eru -20ºC, na oge ọkọchị dị nwayọọ. Ya mere, oscillation thermal bụ ihe na-erughị 20ºC.
Oke ihu igwe: okpomọkụ na-adịkarị ala ma ọ bụ dị ala. Oge oyi na-ewe ọnwa asatọ ma ọ bụ iteghete, na izu ole na ole nke oge ọkọchị ahụ na-adịru, ọ gafere 0ºC. Site na opekempe nke nwere ike ịbụ -50ºC, polar thermal amplitude buru oke ibu, karịa 50ºC.
Na nke a anyị na-eme. Enwere m olile anya na ị mụtakwuola ihe gbasara igwe ọkụ 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Gịnị bụ thermal njupụta?
Mgbanwe ihu igwe na-ebibi akuku coral na Japan